Gabaan wal tuxxuqqiirraa bilsa akka ta’u hojjechaa jiraachuu waldichi beeksise – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Gabaan wal tuxxuqqiirraa bilsa akka ta’u hojjechaa jiraachuu waldichi beeksise
On May 18, 2020 96
Finfinnee, Caamsaa 10, 2012 (FBC) – Tajaajilli bittaa fi gurgurtaa karaa wal xuxxuqqiirraa bilsa ta’een akka raawwatuuf teeknooloojii ‘M Birr’ hojiirra oolchuu eegaluu Waldaan Aksiyoona Liqii fi Qusannaa Oromiyaa beeksise.
Moosaajii dhaabbata Moos jedhamu waliin haala mijataa uumuun hawaasni xuxxuqqaan vaayrsii koronoof osoo hin saaxilamne, tajaajilicha argachuu akka danda’uuf hojjatamuusaa daayreektarri olaanoo waldichaa obbo Tashoomaa Laggasaan ibsan.
Hawaasni tajaajilicha argachuuf waajjiraalee waldichaatii goruudhan bilbila harkaatin teeknooloojicha madaqsfachuun fayyadamuu danda’a jedhan.
Dhaabbilee faaynaansii naannoo Oromiyaa fi naannolee biroo keessa socho’an 6 waliinis kan hojjatu ta’uu ibsan.
Waldaan kun weerara vaayrasii koroonaa ittisuu fi namoota harka qalleeyyii deeggaruuf gumaacha Birri miiliyoona 3 laatera.
Babal’achuu weerara vaayrasii koroonaa fi sirna dubbisa lakkooftuu elektiriikaa…
Manni kitaabaa diijjiitaalaa, kaffaltii malee tajaajila laachuu eegale
Ityoophiyaatti tattamsa’ina weerara vaayrasii koroonaa ittisuuf appilikeeshinoonni…
Qorattoonni Awustiraaliyaa addunyaarra intarneeti saffisaa galmeessuu beeksisan
Babal’achuu weerara vaayrasii koroonaa fi sirna…
Manni kitaabaa diijjiitaalaa, kaffaltii malee tajaajila…
Ityoophiyaatti tattamsa’ina weerara vaayrasii koroonaa…
Oduu biyya keessaa1859